निकै उतारचढावबीच सुनको भाउ बढ्यो, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ। निकै उतारचढावबीच यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा ९०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले...
सुनको भाउ आज पनि घट्यो, चाँदीको बढ्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउमा आज बिहीबार पनि गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बिहीबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार पनि सुनको भाउ तोलामै ८०० रुपैयाँले घटेको थियो। हिजो...
सुनको भाउमा निकै उतारचढाव, आज फेरि तोलामै रु. ८०० घट्यो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा आज बुधबार फेरि सुनको भाउ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँ घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो मंगलबार सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँले बढेको थियो। हिजो प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४...
सुनको भाउ आज बढ्यो, चाँदीको पनि उक्लियो
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ मंगलबार बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो सोमबार सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको थियो। यो गिरावटसँगै हिजो फाइन गोल्ड प्रतितोला ९४...
आज सुनको भाउ घट्यो, तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज सोमबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएका छ। हिजो आइतबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको थियो। हिजो प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ...
आज सुनको भाउ उकालो लाग्यो, चाँदीमा पनि बढोत्तरी
काठमाण्डौ । यो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको भाउ उकालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनका भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको थियो।...
सुनको भाउमा ओरालो यात्रा जारी, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो बिहीबार पनि २०० रुपैयाँले घटेको थियो। हिजो प्रतितोला...
फेरि ओरालो लाग्यो सुनको भाउ, चाँदीमा पनि गिरावट
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन बिहीबार सुनको भाउ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। सुनको भाउ हिजो बुधबार तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन...
फेरि बढ्न थाल्यो सुनको भाउ, आज कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बुधबार पनि बढेको छ। यो साता कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ७०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको हो। सुनको भाउ हिजो मंगलबार पनि तोलामै ९०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ...
सुनको भाउ लगातार घट्ने क्रममा ब्रेक, आज तोलामै रु. ९०० बढ्यो
काठमाण्डौ । गत साताबाट लगातार घटिरहेको सुनको भाउ आज मंगलबार बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ९०० रुपैयाँले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेको सुनको...
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुनको भाउ तोलामा ६०० रुपैयाँले घटेको हो। यो गिरावटसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। गत साता लगातार लगेको सुनको भाउ कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार भने...
काठमाण्डौ । सुनको गरगहना किन्दा तपाइँले यो सोच्नुहुन्छ कि सुन कहाँबाट आउँछ ? के सुुन सधैँ आपूर्ति भइरहन्छ ? वा के यो कुनै बेला सकिन्छ पनि ? पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा रेकर्डतोड वृद्धि भएको थियो। सुनको भाउ प्रतिऔँस २ हजार डलर पुगेको छ। अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन आपूर्ति सकिन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। पिक...
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा लगातार आइरहेको गिरावटमा आज शुक्रबार ब्रेक लाग्दै बढोत्तरी भएको छ। यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामै ८०० रुपैयाँले बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ९०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो बिहीबार...
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा आइरहेको लगातारको गिरावटले आज बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ। आज पनि सुनको भाउमा भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामै १ हजार २०० रुपैयाँले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार १०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९२ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार पनि...
सुनको भाउमा लगातार भारी गिरावट, दुई दिनमै तोलामा रु. २९०० घट्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउमा आज बुधबार पनि भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामै १ हजार २०० रुपैयाँको गिरावट आएको छ। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ हजार ८०० रुपैयाँमा झरेको छ। हिजो मंगलबार पनि सुनको भाउमा १ हजार ७०० रुपैयाँको गिरावट आएको थियो। यो गिरावटसँगै...